Ghana oo beenisay in ciidamo boolis ah oo ka socda dalkeeda ay ku jiraan howl-galka AMISOM – Radio Daljir
Nofeembar 4, 2013 4:07 b 0
Accra, ?November 4, 2013 – Barraha internetka ee ay isticmaalaan howl-galka AMISOM ayaa lagu baahiyey in saraakiil kuwa booliska ah ?oo ka yimi dalka Ghana, ?ay qayb ka noqdeen howl-galka nabad ilaalinta midowga Afirka ee ka socda dalka Soomaaliya.
Dowladda Ghana ayaa beenisay in ay ciidan ku biiray AMISOM u dirtay Soomaaliya, sidoo kale waxaa ay sheegeen in aysan qorshaha ugu jirin in ay ku biiraan howl-galka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM.
Mr Cephas Tetteh oo ka mid ah saraakiisha booliska Ghana ayaa la hadlay saxaafada waxaana uu? yiri ? ma jiraan 90 sarkaal oo boolis ah oo aan u dirnay dalka Soomaaliya. Oo xilligan jooga dalkaas waa been abuur.?
Howl-galku waxay sheegeen in booliska Afrika ka jooga Soomaaliya ay tababar siiyaan ciidanka dowladda Soomaaliya ee booliska ah.
AMISOM ayaa sheegtay in ciidamo boolis ah oo ka socda dalalka Afrika ay ku sugan yihiin Soomaaliya, waxaa ay sheegeen in ay howl-galka ku jiraan 363 Askari oo ka kala socda Nigeria, Uganda, Zimbabwe, Sierra Leone, Ghana iyo Gambia.